Kuyathembisa kugogo owadlwengulwa | IOL Isolezwe
Kuyathembisa kugogo owadlwengulwa
Isolezwe / 15 August 2012, 2:48pm /
SIYALULAMA isalukazi (84) sasoDlameni, KwaSwayimane esadlwengulwa ngumlisa osafunwa uthuli ngenyanga edlule.
Lesi salukazi sadlwengulwa emuva kwesonto kudlwengulwe esinye esina-94 kuyo le ndawo.
Ngesikhathi Isolezwe livakashela ekhaya lalo gogo ubehleli emnyango ethamele ilanga kepha bude buduze nalapho ehlala khona iziphathimandla zeMinyango eyahlukene kahulumeni bezidingida izigameko zokudlwengulwa kwezalukazi KwaSwayimane.
Ezigamekweni ebezidingidwa kubalwa nesokudlwengulwa kwaso.
Indodana yalesi salukazi (ogama layo ligodliwe ngoba kuvikelwa ugogo) ithe unina useyalulama ngemuva kwalesi sigameko.
“Usengcono kakhulu uma kuqhathaniswa nesikhathi esanda kudlwengulwa ngoba wayengakwazi ngisho ukwenzani futhi ubona ukuthi lesi sigameko simhlukumezile,” kuchaza indodana.
Ithe okusele manje wukuthi unina usathukile futhi unovalo lokuthi uma esele yedwa kungaphinde kungene umuntu enze lokhu okwenziwa yilo mlisa kuyena yingakho sebeqikelela ukuthi kuba khona umuntu ohlala naye ngaso sonke isikhathi.
“Uze angafuni nokulala ngoba ethi akafuni ukusala yedwa ngoba lesi sigameko sisabuya njalo engqondweni yakhe futhi ukhuluma ngaso njalo,” kuqhuba indodana kagogo.
Uphinde wathi sebethembe amaphoyisa athi avame ukubonakala eqaphe isimo ebusuku kuleya ndawo emuva kwalezi zigameko.
Ngenxa yokubonakala kwamaphoyisa sekuze kwashintsha nezikhathi zokuvalwa kwamathaveni abesolwa ngokubhebhethekisa ukusetshenziswa kakhulu kotshwala nezinye izidakamizwa. Ikhansela lakuleya ndawo uMnuz Mduduzi Goba uthe ukusetshenziswa kotshwala nezidakamizwa ezifana nensangu yikho okudala izinkinga kuleya ndawo.
Uthe baxoxisana nabaphathi bamathaveni ukuthi basheshe bavale ezindaweni zotshwala.
Uveze ukuthi kukhona abafana abasebenzisa izidakamizwa bese benza ubugebengu athe basolwa ngokuba nesandla kwezinye zezigameko zobugebengu kuleya ndawo.
Ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLt General Mmamonnye Ngobeni uveze ukuthi sekukhona umsolwa othungathwa ngamaphoyisa ecaleni lokudlwengulwa kukagogo.
Uthe banethemba lokuthi amaphoyisa azomthola esizwa wumphakathi. Indodana kagogo ithe inethemba lokuthi uzotholakala lo msolwa ukuze asuswe emphakathini njengoba kuthiwa ubhacile.